Wamkelekile kwiJungle: UBenicio Del Toro nguPablo Escobar kwi 'Paradise Lost' | - Iimuvi
Eyona Iimuvi Wamkelekile kwiJungle: UBenicio Del Toro nguPablo Escobar kwi 'Paradise Lost'
Wamkelekile kwiJungle: UBenicio Del Toro nguPablo Escobar kwi 'Paradise Lost'
UJosh Hutcherson, ekhohlo, kunye noBenecio Del Toro Escobar: IParadesi elahlekileyo .
ixesha lebhulorho 3 hulu
Ngokusekwe kwiziganeko eziyinyani, eli libali elothusayoU-surfer waseCanada othe wancanca kwisidima sobugqwetha senkampani yeziyobisi yaseColombia eyayilawulwa nguPablo Escobar. Ukhohlakele kwaye ukhohlakele, u-Escobar wayenenkolo kwaye wayezinikele kakhulu kusapho lwakhe, eyalela ukubulawa kwabafazi nabantwana ngelixa wayefunda Incwadi yeJungle kwintombi yakhe elusana. Ngaphantsi kwesiphathamandla somlawuli-umbhali wokuqala wase-Italiya u-Andrea di Stefano, elinye iqhinga, elinemibala kunye nomsebenzi oxhonywe ngononophelo ngu-Benecio Del Toro yazisa kwaye iphakamise ifilimu iye kwinqanaba eliphezulu kunokuba kufanelekile.
I-ESCOBAR: IPHaradesi ILAHLEKILE ★ ★
( 2/4 iinkwenkwezi )
Ibhalwe ngu: UAndrea Di Stefano noFrancesca Marciano
Yeluswa nguwe: UAndrea Di Stefano
Inkwenkwezi: UJosh Hutcherson, uBenicio Del Toro kunye noBrady Corbet
Ixesha lokuqalisa: I-120 imiz.
Isicwangciso siyidolophu yaselunxwemeni yaseMedellin ngo-1991, apho i-buff blonde surfer uNick (uJosh Hutcherson evela Mdlalo yokulamba I-franchise) uhamba nomntakwabo uDylan (Brady Corbet) ukuvavanya amaza amnandi, kwaye wawela intombazana entle egama linguMaria, ophakathi kwiphulo lonyulo kumalume wakhe wezopolitiko. Lo malume ujika abe ngu-Escobar, obiza uNick epatini kwindawo yakhe enqabileyo yenqaba yokuhlangana nosapho lukaMaria. Xa esiva malunga neqela labaxhaphazi eliye lahlukumeza uNick kunye nomntakwabo elunxwemeni, ootsotsi bafunyanwa bebulewe, bexhonywe ngeenyawo zabo emthini.
Ukususela ngelo xesha ukuya phambili, u-Escobar uthatha uNick phantsi kwephiko lakhe, amphathe njengonyana wakhe, kwaye amrhwebeshele umsulwa ongenatyala kwihlabathi lamaqela agabadeleyo, urhwaphilizo kunye nokuphalazwa kwegazi, emntywilisela kubukumkani bakhe bokurhweba ngecocaine de kube lixesha lokuba abaleke. Ukuzinikela kuka-Escobar kuMaria kwakukrakra kangangokuba akazange athandabuze ukubandakanya uNick kwishishini losapho, elindele ukuba abuyisele ukubuk 'iindwendwe ngobomi bakhe.
Ngelixa ubundlobongela buqhubeka kwaye urhulumente wase-U.S uthi u-Escobar ulwaphulo-mthetho olufunwayo, umntakwabo Nick ukhumbula ekhaya eCanada kwaye aba bazalwana babini bafuna ukuthatha uMaria agoduke nabo. Umalume wakhe u-balks kunye nobudlelwane bukaNick kunye nomalume wakhe wexesha elizayo bayakhula ukusuka kwingozi ukuya ekubulaleni xa enikwa umsebenzi wokubulala enye yeentshaba zika-Escobar. Isazela sikaNick siyamthintela ekugqibeni umsebenzi kwaye uyaqhubeka nokubaleka ukuze aphile.
Endaweni yokubonisa ulungelelwaniso lolwaphulo-mthetho oluhleliweyo lwaseColombia ngaphakathi, ifilimu iyisa elangeni kunye nawo onke amanxeba avulekileyo abonisa. Kuba yenzeka ngeentsuku zokugqibela zolawulo luka-Escobar, ikwabonisa uthando olunoburharha abantu baseColombia ababethululela kumbulali wezinja ophambeneyo, bemguqula ukuba abe ligorha labantu. Iminyaka elishumi ukusweleka kwakhe kwi-1993, usanikwa inani elidumileyo likaRobin Hood. UJosh Hutcherson uzibambile njengenkwenkwana eyothusayo kwilizwe langaphandle apho kungekho mntu unokuthenjwa kwaye ukufa kulindelwe kuyo yonke i-alley, kodwa ngelixa ifilimu ibamba isiphithiphithi kunye noxinzelelo ngexesha lolawulo luka-Escobar loyikiso, ishiya uninzi lomanyano. ukuza kuthi ga kulo uhlala enomdla uMnu Del Toro.
Eschewing flamboyance, udlala inkosi yeziyobisi ngobuqhetseba njengesifundo sobudenge kunye nobubi obubonakala buqhelekile, elandela ixhoba lakhe ngamehlo athuleyo, anamehlo aqinileyo, njengokuhamba kwekhamera ebhalwe kakuhle, engaphoswa nto. Kumbhalo osemazantsi kwimbali osesondele kakhulu kwintuthuzelo, uyintsingiselo yokwenene yeparadesi elahlekileyo.
'Kubo bonke abafana endibathandileyo ngaphambili' Ukudibanisa iFashoni yeVintage kunye naphakade 21
Imfihlelo kaThomas Trump Imfihlo ye-Kremlin Ties Ufumene okunzulu
'U-Detective Pikachu' Akanayo i-Post-Credits Scene. Ithini loo Nto malunga neFranchise yayo enokubakho?
ungayilungisa njani ngokukhawuleza ikhredithi yam
Ixabiso le-tv ye-youtube lenyuka ngo-2020
Ngaba ikhona indlela yokujonga iinombolo zeeselfowuni
yeyiphi eyona pilisi yokutya imiselweyo?
Ngaba ixilongo linokubuyisela uyilo